Naya Bikalpa | बी.पी कोइरालाको जीवनयात्रा - Naya Bikalpa बी.पी कोइरालाको जीवनयात्रा - Naya Bikalpa
बी.पी कोइरालाको जीवनयात्रा
प्रकाशित मिती: २०७४ माघ २९, ०९: ३०: ११
विश्व समाजवादी आन्दोलनका अग्रपङ्क्तिका नेता, नेपालमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद स्थापनार्थ गरिएका आन्दोलनका अग्रज विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका सम्बन्धमा जति लेखे पनि जति अध्ययन, खोज गरे पनि थोरै हुन्छ । जसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादका निम्ति अर्पित गरेको थियो । जसले जीवनको अन्त्य समयतिर तीन तत्व–राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद–प्राप्तिका निम्ति ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति’ प्रतिपादन गरेर व्यवहारमा र प्रयोगमा ल्याउन सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई सक्रिय पार्नुभएको थियो ।
८५ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र÷कृषकवर्ग भएको नेपालमा बी.पी सबैलाई आफूसरह मध्यमवर्गीय परिवार बनाउने सपना–जपना गर्नुहुन्थ्यो ।
प्रजातान्त्रिक समाजवादको स्थापना गरेपछि मात्र नेपाली जनताको सपना साकार हुन्छ भन्ने सङ्कल्प राख्ने बी.पीले यिनै आदर्श र मान्यताका निम्ति समग्र जीवन बिताउनुभयो । एउटा महान् तपस्वीको रुपमा आत्मविश्वासका निम्ति सङ्घर्षरत रहनुभयो । अदम्य साहस र दृढसङ्कल्प र आत्मविश्वासका प्रतिमुर्ति बी.पी जनताद्वारा सदा सम्मानित रहनुभयो । विरोधीले समेत ‘वीर बी.पी मुर्दाबाद’ भनेर गाली गर्दर्थे । यो यथार्थ हो– जो आफ्नो महत्तम लक्ष्य प्राप्तिमा समर्पित रहन्छ, ऊ सदा अमर हुन्छ ।
“व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार समय समयमा चुनाव, पार्टी सङ्गठनको अधिकार आदि प्रजातन्त्रका अभिन्न अङ्ग हुन् । जहाँ यी सब अधिकार एवं स्वतन्त्रतामा कुनै किसिमको पनि बन्धन रहन्छ त्यहाँ प्रजातन्त्रमाथि नै बन्धन छ भनी ठान्नुपर्छ । समाजवादको यो एउटा मुख्य पक्ष प्रजातन्त्रको पक्ष हो । प्रजातान्त्रिक समाजवादमा निहित समानताको अर्को रुप आर्थिक समानता हो ।” नेपाली काङ्ग्रेसको पैसठ्ठी वर्षे इतिहासको मूल धुरी जननेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नै रहनुभएको छ । जुन कुरा कसैले पनि नकार्न सक्तैन एउटा समय यस्तो पनि थियो, जुनबेला नेपाली काङ्ग्रेस र बी.पी परस्पर पर्यायका रुपमा रहेका थिए ।
विश्व समाजवादी आन्दोलनका अग्रपङ्क्तिका नेता एवं नेपालमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद स्थापनार्थ गरिएका आन्दोलनका अग्रज जननेता बी.पी कोइराला एउटा अमर व्यक्तित्वको नाम हो । १३–१४ वर्षको उमेरदेखिनै प्रारम्भ भएको उनको राजनीतिक जीवन आफ्नो अन्त्य समयसम्म पनि राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादका निम्ति समर्पित रह्यो । “राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति” जस्तो नयाँ राजनीतिक नीति प्रतिपादन गरेर नेपाली काङ्ग्रेस मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीका निम्ति अमूल्य गुन लगाउनु भएको छ– बी.पी.ले ।
पूर्व २ नं. दुम्जाको नाम लिनासाथ कोइराला थर– परिवारबारे प्रत्येकका स्मृतिमा घुम्न थाल्दछ । भनिन्छ मकवानपुरे कोइरालामध्ये दामोदर कोइराला तात्कालीन सेन राजाका बडाकाजी थिए । उनले सिन्धुलीको दुम्जा भन्ने ठाउँ बिर्ता पाएर त्यसतर्फ लागेका थिए । पछि क्रमशः उनकै वंशजहरु पूर्वतिर फैलिए । दामोदरदेखि क्रमशः हरिहर–परशुराम–जनमेजय–विश्वम्भर–करुणाकर– शिवनिधि हुँदै नन्दिकेश्वर भए नन्दिकेश्वरका सरदार कालिदास–सुब्बा नारायणप्रसाद, हरिप्रसाद र खरदार र कृष्णप्रसाद समेत चारभाई छोरा थिए । यीमध्येको कान्छा कृष्णप्रसाद नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका आदि पुरुष मानिन्छन् ।
प्रजातन्त्रका महान सेनानी बी.पी कोइरालाको वंशलता–
यिनले लमजुङको कोइराली भन्ने एउटा ठूलो फाँट बिर्ता पाएर त्यतै बसोबास गर्न थाले । यिनीपछिका सन्तानहरुको थर यही कोइराली भन्ने स्थानकै आधारबाट कोइराला बन्न गयो । लालचन्द्र कोइरालाका तीनभाइ छोरामध्ये महिला विशाको सन्तानक्रम कोइराला वंश विस्तारमा अघि बढेको देखिन्छ । विशाबाट वसु, वसुबाट परम भए ।
अनि परमका छोरा थिए काजी दामोदर कोइराला । यिनी मकवानपुरे सेन राजाका मुख्य काजी थिए । यिनैले सिन्धुलीको दुम्जा बिर्ता पाएका थिए । यहीँबाट कोइराला वंश पूर्वतिर विस्तार भयो । दामोदरबाट क्रमशः शिवदत्त र हरिहर भए । हरिहरका शिवराम र परशुराम थिए । परशुरामबाट मार्कण्डेय, कपिलामुनी र जनमेजय भए । जनमेजयका बिलभद्र, यमदम्नी र विश्वभर जन्मिए विश्वभरका जनमंगल, करुणाकर, कुसुमाकर र रामनारायण भए । करुणाकरबाट शिवनिधि जन्मिए । शिवनिधिका श्रीहर्ष, नन्दिकेश्वर, जगनधर, हरिदत्त र बुद्धिनाथ थिए ।
नन्दिकेश्वरबाट सरदार कालिदास, सु नारायण, हिरालाल, कृष्णप्रसाद समेत चारभाई भए ।
नेपालमा प्रजातान्त्रिक राजनीतिक आन्दोलनका सूत्रपात गर्ने गान्धीवादी नेताका रुपमा कृष्णप्रसाद चिनिन्छन् । यिनै कृष्णप्रसादका छोराहरु हुन् मातृका, विश्वेश्वर, हरिहर, केशव, तारिणी र गिरिजाप्रसाद । छोरीहरु सौरी, नलिनी, इन्दिरा र विजयालक्ष्मी गरी चार बहिनी थिए । अनि विश्वेश्वरबाट प्रकाश, श्रीहर्ष शशांक र छोरी चेतना भए ।
(स्रोतः बी.पी कोइरालाको जीवनयात्रा नरेशचन्द्र भट्टराई प्र.सं २०४८)
कृष्णप्रसाद अर्थात् पिताजीले एउटा ढाक्रेले लगाएको कोटको झुत्रो कपडा लिएर त्यसको बदलामा ढाक्रेलाई नयाँ कपडा लगाउन दिए । अनि ती झुत्रा कपडाको पार्सल बनाएर सिंहदरबार पठाइदिए । चन्द्र समशेरलाई कृष्णप्रसादले केके न सौगात पठाए होलान् भन्ने उत्सुक भैरहेको बेला त्यस्तो गनाउने मैलो झुत्रो कपडाको पार्सलले निश्चय पनि भारदारका बीच हलचल मच्चायो । भनौं यो कुरा चन्द्र समसेरका निम्ति भयानक घटना जस्तो भयो होला ।
नेपालका प्रथम प्रजातन्त्रवादी समाजसेवी–कृष्णप्रसादको जन्म वि.सं. १९३६ दुम्जा–सिन्धुलीमा भएको थियो । पिता नन्दिकेश्वर र आमा राज्यलक्ष्मीदेवीका कान्छा छोरा कृष्णप्रसादका तीनवटी पत्नी मध्ये जेठी रुक्मिणीको निधनपछि मोहनकुमारीसँग विवाह भयो । यीबाट छोरा मातृकाप्रसाद र छोरीहरु नलिनी उपाध्याय, इन्दिरा र सौरीदेवी जन्मिएका थिए । कान्छी पत्नी दिव्यादेवीबाट विश्वेश्वरप्रसाद, हरिहरप्रसाद केशवप्रसाद, तारिणीप्रसाद र गिरिजाप्रसाद एवं छोरी–बुनु जन्मिएका थिए ।
दयालु, परोपकारी, उद्यमी, मृदुभाषी, मानवतावादी, समाजसेवी, शिक्षासेवी एवं प्रजातन्त्रका पक्षपाती कृष्णप्रसाद संस्कृत, अङ्ग्रेजी, फारसी, नेपाली, हिन्दी, बंगाली, उर्दु, मैथिली आदि भाषाका ज्ञाता थिए । वि.सं १९४८ देखि दाजु सरदार कालिदाससँग विराटनगर बसोबास गर्न थालेका कृष्णप्रसादले विराटनगरलाई नै कर्मथलो बनाए । विराटनगरमा कृष्णप्रसादले संस्कृत पाठशाला, आदर्श विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, काली मन्दिर आदिको स्थापनासँगै विभिन्न सामाजिक काम गरेका थिए । विभिन्न उद्योग स्थापनासँगै विराटनगर आधुनिक बजारका रुपमा व्यवस्थित पारेका थिए ।
महात्मा गान्धीसँग धेरैपटक भेट गरेका कृष्णप्रसादले गान्धीका आदर्श र चिन्तनबाट प्रभावित भएर नै नेपाली जनजीवनको उत्थानमा विभिन्न कार्यहरु गरेका थिए । पार्सल घटनापछि चन्द्रसमसेरका कारण एघार वर्ष भारतमा निर्वासन झेलेका कृष्णप्रसादको २००१ मा काठमाडौंको जेलमा निधन भयो । प्रजातन्त्रका निम्ति उनी यसरी शहीद भएका थिए ।
बी.पी. को जन्म
“आमा” को प्रसव अत्यन्त जटिल हुन गयो । तत्काल एउटी सिपालु डाक्टरर्नी आइपुगेर शल्य चिकित्साको मद्दतले उद्धार नगरेको भए मैले त प्रकाश नै देख्न पाउने थिइनँ, आमा पनि जीवीत रहनुहुने थिएन । मैले संसारमा प्रवेश गर्दा परिवारको एउटा परम्परा तोडेँ । प्रसव कोठामा आधुनिक चिकित्सा विज्ञानको उपकरणलाई पु¥याएँ । आजकालको दृष्टिमा त्यो सामान्य घटना हो । तर तिनताका हाम्रो परिवारका निम्ति मात्र होइन नेपाली मध्यमवर्गीय परिवारका निम्ति पनि त्यो एउटा क्रान्तिकारी कदम थियो ।
वि.सं १९७१ भाद्र २४ गते ई १९१४ सेप्टेम्बर ८ का दिन बनारसमा जन्मिएका चूडामणि कोइरालालाई ठूलाबा कालीप्रसादले काशी विश्वनाथको वरप्रसाद ठानेर विश्वेश्वर नाम जुराइदिए । जुन नाम नेपालभित्र फैलिँदै विश्वप्रख्यात बन्यो । “म जन्मिएँ नक्षत्र गणनाअनुसार चूडामणी नाम लिएर तर मेरा ठूलो पिताजीले बनारस मेरो जन्म नगरीको महिमालाई ध्यानमा राखेर अर्को नाउँ विश्वेश्वर राखिदिनुभएको थियो । जो प्रचलित हुन गयो ।” बी.पी. कोइरालाको बाल्यकाल विराटनगरमा नै बित्यो ।
पिताजीबारे बी.पी. को भनाइ
आफ्ना पिता कृष्णप्रसादका बारेमा बी.पी. ले लेख्नुभएको एउटा सन्दर्भ रोचक र मननीय छ । “पिताजीले व्यापार गर्नुभयो । निकै पैसा कमाउनुभयो । विराटनगरको स्थापना गर्नुभयो । त्यसबेला भन्सार अड्डाहरु ठेक्कमा दिने चलन थियो । प्रायः देशभरिका अड्डाहरुलाई ठेक्कामा लिनुभयो । व्यापार खेती भन्सार आदि सबै क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्नुभएको थियो र केही कुराको कमी थिएन ।
एकपल्टको घटना हो– धुलाबारीस्थिति बजार अड्डाबाट विराटनगरतिर घोडामा फर्कदैँ हुनुहुन्थ्यो । जंगल पार गरेर एउटा ठूलो फाँटमा एकान्त ठाउँमा आइपुगेपछि हठात् एउटा आवाज सुन्नुभयो । “कृष्णप्रसाद, तिमिले यी सबै कुरा आफ्ना निम्ति ग¥यौ । तिमिले पैसा कमायौ, आफ्ना निम्ति, दुलहीका निमित, छोराछोरीका निम्ति अर्थात् आफ्नै निम्ति कमायौ ।
मिती अहिले जो घमण्ड गरिरहेका छौं त्यसमा घमण्ड गर्ने केही कुरा छैन । तिमीले के ग¥यौ ? जबसम्म तिमीले अरुहरुका निम्ति केही गर्दैनौं तबसम्म तिमीले कमाएको केही मान्य हुँदैन । यी त कुनै स्वार्थी मानिसका निम्ति सन्तोषको कुरा हो ।” घरमा आएर मैले त्यस्तो आवाज सुने भनेर आमासँग र केही आफ्ना विश्वासी साथीहरुलाई सुनाउनु भएछ । अनि त्यस कुरालाई देववाणी मानेर परसेवातर्फ लाग्नुभयो ।
बी.पी. ले आत्मवृत्तान्तमा भन्नुभएको एउटा प्रसङ्ग छ–“कृष्णप्रसाद परिवार बनारस निर्वासनमा बसेका बेला विराटनगरका शिक्षकको एउटा छोरालाई फाँसी र अर्को छोरालाई कालापानी पठाएको सुनेर कृष्णप्रसाद र बी.पी. (बाबुछोरा) भेट्न गएछन् । कृष्णप्रसादले छोराहरुको फाँसी सम्बन्धी घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दा ती बङ्गाली शिक्षकले भनेछन्– “दुई भाई छोरा देशको काममा आए ।
बाँचेका भए पनि यस भन्दा ठूलो काम के गर्थे होला ? बरु मलाई त मेरा दुई भाई मात्र किन भए भन्ने पीर लागेको छ । अरु छोरा भएदेखि राष्ट्रको काममा ती पनि आउने थिए ।” कृष्णप्रसाद कोइराला निर्वासित हुँदा परिवार र परिचारक समेतको पैतालीस जनाको समूह थिए । ती सबैको बन्दोबस्त मिलाउनु सामान्य कुरा थिएन । तर हिम्मती कृष्णप्रसाद त्यहि ठूलो शरणार्थी जत्था आफ्ना साथै लिएर निर्वासित बनेका थिए । कृष्णप्रसादले देवीप्रसाद सापकोटा, धरणीधर कोइराला र सूर्यबिक्रमको सहयोगमा–गोरखाली र जन्मभूमिको सम्पादन प्रकाशन गरेर राणा शासनका कुकृत्यबारे भण्डाफोर गराएका थिए ।
वि.सं १९७७ मा ‘मकैको खेती’ नामक पुस्तक लेख्ने कृष्णलाल अधिकारीलाई पक्राउ गरेर जेल हालियो । पछि उनी जेलभित्र मरे । तर यस घटनाले नेपालका बुद्धिजीवी समुदायमा ठूलो हलचल ल्याएको थियो । देशरादूनमा ठाकुर चन्द्रसिंहको नेतृत्वमा स्थापित गोरखा लीग र यसका गतिविधिहरु पनि राणा विरोधी थिए । कृष्णप्रसादको पनि समर्थन थियो यस सङ्गठनमा ।
चन्द्रसमशेर काल वि.सं. १९७४ मा निर्वासित कृष्णप्रसाद भीमसमशेरको शासनपछि १९८६ मा नेपाल फर्किएका थिए । कृष्णप्रसाद चुप लागेर बस्ने व्यक्ति थिएनन् । कृष्णप्रसाद चित्तधर, हृदय, धर्मराज, थपलिया, जोगवीर सिंह, महाकवि देवकोटा, बैकुण्ठ लाकौल लगायत पैतालीस जनाले हस्ताक्षर गरेर पुस्तकालय खोल्ने माग गरेका थिए । तर यो कार्य राजद्रोह ठह¥याएर सबैलाई सजाय गरियो । तर यस घटनाको प्रभाव त्यसबेला सम्पूर्ण बौद्धिक समुदायमा परेको थियो ।
वि.सं. १९८७ मा खड्गमान सिंह, मैनाबहादुर सिंह, उमेश विक्रम शाह आदिद्वारा ‘प्रचण्ड गोरखा’ नामक सङ्गठन खोलिएको थियो । १९८८ साउनमा ती सबै पक्राउ परे । यी सबै २००७ को क्रान्तिपछि मात्र छुटेका थिए । गान्धी आश्रममा पाँवर्ष जति बसेर फर्किएका तुलसी मेहरले १९८३ मा चर्खा प्रचार अभियान सुरु गरे । चर्खा प्रचारका शाखाहरु बनाए तर १९८८ मा चर्खा प्रचार प्रतिबन्धित भयो । तुलसी मेहर पक्राउ परे । अरु केही व्यक्ति पनि कारवाहीमा परेपछि चर्खा अभियान पनि बन्द प्रायः भयो । तर यस काण्डले पनि जनतामा चेतना जगाउन निकै ठूलो योगदान पुगेको थियो ।
सन् १९३९ देखि दोस्रो विश्वयुद्ध प्रारम्भ भयो । बेलायतलाई राणाशासकले सहयोग गरेका थिए । तर केही विदेशी सेनामा रहेका गोर्खाली सेनाले विद्रोह गरेर सुवासचन्द्र बोसको आजाद हिन्द फौजमा लागेर भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा सहयोग पु¥याएका थिए । भारत स्वतन्त्र भएपछि २००७ को क्रान्तिमा यिनै आजाद हिन्द फौजसँग सम्बद्ध गोर्खाली सेनाले सहयोग गरेका हुन् । वि.सं १९९४ मा काठमाडौंका केही व्यक्तिले, महावीर स्कूलको नामबाट एउटा शिक्षालय स्थापना गरे । फत्तेबहादुर सिंह र चिनियामान सिंहका घरमा पठनपाठन सुरु गरिएको उक्त विद्यालयमा गंगालाल श्रेष्ठ, चन्द्रमान मास्के, पूर्णबहादुर मानव, चित्तधर हृदय, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, रामजी जोशी आदि व्यक्तिहरुले पढाउने गरेका थिए । यस स्कूलमा पढाउने शिक्षक र विद्यार्थीहरुमा राजनीतिक जागरण सहित राणाविरोधी भाव फैलिँदै गएको थियो । (डा. तुलसी भट्टराईद्वारा लिखित बी.पी कोइराला र नेपाली कांङ्ग्रेस नामक पुस्तकबाट)
२०७४ माघ २९, ०९: ३०: ११